Unyango lwe Window eqinileyo Isimnyama sokucima ikhethini lethu, China Izinto eziSebenzayo zoNyango lwe Window eziMnyama ukucima abavelisi bethu beKhethini, abaXhasi, abaFektri - Zhejiang Rancho Santa Fe Home textile Co., Ltd
Ukubaluleka kwonyango oluqinileyo lwe Window ukuze kucinywe umbala wethu
Inani Model: MNYAMA
IMIBALA EZAHLUKILEYO NOKUQALA KWENKQUBO -Le khethini yokumnyama iyafumaneka ngombala ohlukeneyo okanye ukudityaniswa kwemibala emininzi. Abathengi banokukhetha umbala kunye nendawo edibeneyo ngokukhululekileyo. Indwangu ngokwayo yenye yezona zinto zithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Ngobukeka obuhle, inika umoya ococekileyo kunye nolungeleyo kwigumbi, okanye ithafa kuphela eliguqukayo. Izinto ezibonakalayo yi-100% ipholiyesta, inokuthintela i-85% -93% yokukhanya kunye ne-UV ray.
UKUVIMBELA UKUKHANYA KUNYE NOKUGQIBELA OKUFANELEKILEYO- ziikhethini ezimnyama okanye ikhethini engacacanga. Ubunzima belaphu busuka kwi-200gsm ukuya kwi-320gsm. Amakhethini amnyama ashushu e-eyelet aya kugcina ukukhanya kupholile kwaye kupholile amakhaya ngexesha lasehlotyeni elishushu kwaye kugcine kwiindleko zokufudumeza ngokugcina ukubanda ngexesha leenyanga zasebusika. Izinto ezikhethwe ngobunjani, akukho hems zingalinganiyo, kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo kumava emveliso angcono.
Ilaphu lethu leTekhnoloji yeTriple Weave Blackout kukukhanya kunye nokuhamba kwezinto ezinomaleko okhethekileyo ofihliweyo othintela ukukhanya ukuze ulale ngokuzolileyo. Ke inokuqinisekisa ukuba abantu abazukuphazanyiswa lihlabathi langaphandle. Bazokumisa umhlaba ongaphandle ukuba ungarhubuluzi ungene kwixesha labucala.
I-Luxury Roanne Brown edibeneyo yeDuvet Cover
Uyilo lweLwandle oluLwandle oluLuhlaza-HF29028
Umbala weBloko yoKhuseleko lweeKhethini-iLinen Jonga iSemi Sheer Sheet polyester 8294 yoshicilelo lokushicilela
ILilac Chevron, iGeometric Pattern polyester 8625 Shading Light Sheer Sheer